Doorashada guddoomiye ku xigeennada golaha shacabka oo haatan socota – Radio Muqdisho
Waxaa haatan Teendhada Afisiyooni ka socota diyaar garowgii u danbeeyay ee doorashada guddoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Soomaaliya iyo ku xigeenka labaad sida xalayto ay ku ballameen guddiga hirgelinta doorashada Aqalka hoose.
Guddoomiye ku xigeenka 1-aad ee Aqalka hoose ayaa waxaa u sharraxan 10 xildhibaan, halka ku xigeenka labaadna ay u sharraxan tahay 7 mudane.
Guddiga doorashada guddoonka aqalka hoose ayaa sheegay inay ka go’an tahay maanta dhammaystirka guddoonka, si maalmaha soo socdo ay u guda galaan qaban-qaabada doorashada madaxweynaha hoggaamin doona dalka afarta sanno ee soo socota.
Kalfadhiga maanta ayaa lagu wadaa inuu guddoomiyo, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo xalay loo doortay Guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliyeed.
Xildhibaan Sacdiyo oo loo doortay Guddoomiye ku-xigeenka 1aad halka Abshirow loo doortay G.Ku-xigaanka 2aad BFS